‘कपिल शर्मा शो’मा सुनिल ग्रोवर फर्किने, कति सम्मको सत्य ? | Diyopost
‘कपिल शर्मा शो’मा सुनिल ग्रोवर फर्किने, कति सम्मको सत्य ?
मुम्बई,भदै ३० । कमेडियन कपिल शर्मा र सुनील ग्रोवरले पछिल्लो केही बर्ष एकसाथ कमेडी मार्फत दर्शकको मनमा राज गरे । यी दुबै कमेडियनका अलग–अलग अन्दाज दर्शकले रुचाए । दुबैले एकसाथ मिलेर दर्शकलाई निकै मनोरञ्जन समेत दिलाए ।
यो ट्वीटमा कयौं फ्यानले सकारात्मक कमेन्ट समेत गरेका छन् । एक फ्याले लेखेका छन् ‘मलाई लाग्छ । सुनिल फर्किन लागेका छन् । यो एक इसारा हो ।’ अर्का एक फ्यानले लेखका छन् ‘सुनिल सर तपाइँको एक्ट्सको धेरै मिस गर्छु ।’अर्का एक फ्यानले कमेन्टमा अब त आउनुस् डाक्टर साब भनेर समेत आग्रह गरेका छन् ।
Email Address: diyopo[email protected]